DAAWO:- Sameynta iyo Qurxinta Suniyaha Indhaha - Hablaha Media Network
DAAWO:- Sameynta iyo Qurxinta Suniyaha Indhaha
HMN:- Sida aan wada og nahay Indhaha ayaa ah muraayada qalbiga, waxay tilmaamaan dareenka qofka sida ; farxadda, murugada iyo wax walba oo la xiriira ujeedka aad damacsan tahay.
Haddaba suniyaha ayaa kaalin weyn ka qaata qurrxinta indhaha, waxayna u yihiin muhiim suniyaha indhaha quruxdooda waayo quruxda wejiga iyo guud ahaan waxay soo jiidasho yeeshaan marka si wanaagsan loo hagaajiyo suniyaha indhaha.
Waxaa jira Habab kala duwan oo suniyaha loo qoro taasoo soo martay waqtiyo kala duwan ilaa iminkana sii socda, waxa jirtay beri dumarku aad iskugu badin jireen qalinka madow bilowgii 80aadkii, markii laga baxayna ay si xoogan u bilaabantay dhuubida suniyaha oo aad loo xardhi jiray sidii dayax bishay oo kale.
Waqtiga hadda la joogo aad ayay ugu gedisan tahay sidii waa hore, waxaana la dhihi karaa waa waqtigii ugu wanaagsanaa ee horumar la taaban karo laga gaaray qurxinta suniyaha dumarka, waxaana dadka ka shaqeeya quruxdu aaminsan yihiin in aan loo baahneyn in wax weyn laga beddelo suniyaha iyo habka ilaahay uu u abuuray, taasoo ay tahay inuu qofku marwalba si wanaagsan u hagaajiyo.
Haddaba waxyaabaha aad u baahan tahay si aad u qurxiso suniyahaaga waxaa ka mid ah;
– Sakiinta lagu qoro suniyaha ama rifaha suniyaha.
– Qalinka lagu buuxiyo suniyaha oo midabka timahaaga u eg.
– Miikyaajka (makeup) indhaha soo saara sida:
– Midabada indhaha dushooda la mariyo.
– Bootarka qariyaha loo yaqaano oo qoyan.
FG: Fadlan Iska ilaali qalinka aadka u madow ee suniyaha ka dhiga qaar aan u ekeyn dabiici. Waxaa kale oo aad iska yareysaa isticmaalka sakiinta, taasoo keeni karta xaaluf iyo nabaadguur ku yimaada suniyaha.
Muuqaalkaan hoose waxaad ka daawan kartaa qaabka loo sameeyo suniyaha, waxaana soo jeedin doontaa walaasheen Ikhisbeauty oo ka qeyb qaadata horumarinta quruxda gabdhaha Soomaalida islamarkaasina chanal ku leh shabakadda muuqaalada ee youtube-ka, fadlan raac tilmaamaha ay bixineyso kadibna isku day oo ka faa’iideysi wanaagsan Insha’Allaah.